ဟဒီးဆ်: ဧကန်အမှန်ပင် ဟလာလ်(တရားတော်က ခွင့်ပြုထားသည့်အရာ)သည် ထင်ရှားပြီး၊ ဟရာမ်(တရားတော်က တားမြစ်ထားသည့်) အရာသည်လည်း ထင်ရှားသည်။ ထိုနှစ်ခုအကြား၌ သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များရှိပြီး ၎င်းတို့ကို များစွာသောလူတို့မသိကြပေ။ ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များကို ရှောင်ကြဉ်မည်ဆိုပါက မိမိ၏သာသနာနှင့် သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များတွင် ကျရောက်သွားပါက ထိုသူသည် ဟရာမ် သို့ကျရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ - တမန်တော်မြတ်(ﷺ)၏ ဟဒီးဆ်ဩဝါဒတော် ဘာသာပြန် စွယ်စုံကျမ်း
ဟဒီးဆ်: ဧကန်အမှန်ပင် ဟလာလ်(တရားတော်က ခွင့်ပြုထားသည့်အရာ)သည် ထင်ရှားပြီး၊ ဟရာမ်(တရားတော်က တားမြစ်ထားသည့်) အရာသည်လည်း ထင်ရှားသည်။ ထိုနှစ်ခုအကြား၌ သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များရှိပြီး ၎င်းတို့ကို များစွာသောလူတို့မသိကြပေ။ ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များကို ရှောင်ကြဉ်မည်ဆိုပါက မိမိ၏သာသနာနှင့် သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များတွင် ကျရောက်သွားပါက ထိုသူသည် ဟရာမ် သို့ကျရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးအစား: ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ဖိကဟ်ဓမ္မသတ် စည်းမျဥ်းများ။ . ရှရီအသ်အမိန့်ပညတ်ချက်။ .
နုအ်မာန် ဗင်န်ဗရှီးရ်(ရဿွိယလ္လာဟုအန်ဟု)က ဆင့်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်သည် တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်) မိန့်ကြားတော်မူသည်ကို ကြားသိခဲ့ရသည်။ ဧကန်အမှန်ပင် ဟလာလ်(တရားတော်က ခွင့်ပြုထားသည့်အရာ)သည် ထင်ရှားပြီး၊ ဟရာမ်(တရားတော်က တားမြစ်ထားသည့်) အရာသည်လည်း ထင်ရှားသည်။ ထိုနှစ်ခုအကြား၌ သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များရှိပြီး ၎င်းတို့ကို များစွာသောလူတို့မသိကြပေ။ ထို့ကြောင့် မည်သူမဆို သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များကို ရှောင်ကြဉ်မည်ဆိုပါက မိမိ၏သာသနာနှင့် သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ အကြင်သူသည် သံသယဖြစ်ဖွယ် ကိစ္စရပ်များတွင် ကျရောက်သွားပါက ထိုသူသည် ဟရာမ် သို့ကျရောက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ (ထိုသူ၏ပမာသည်)၊ တားမြစ်ထားသော စားကျက်အနီးတွင် မိမိသိုး၊ဆိတ်တို့ကို ကျောင်းသည့် (ဆိတ်)ကျောင်းသားကဲ့သို့ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည်ထို(တားမြစ်ထားသောစားကျက်)ထဲသို့ ကျရောက်ရန် နီးကပ်သွားပြီဖြစ်သည်။ သတိပြုကြလေကုန်။ အမှန်တကယ် ဘုရင်တိုင်းတွင် (ကိုယ်ပိုင်) သီးသန့်တားမြစ် နယ်နိမိတ် ရှိကြလေသည်။ သတိပြုကြလေကုန်။ ဧကန်အမှန် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တားမြစ်နယ်နိမိတ်သည် အရှင်မြတ်တားမြစ်ထားသည့် (ဟရာမ်) အရာများပင်ဖြစ်သည်။ သတိပြုကြလေကုန်။ အမှန်တကယ်ပင် ခန္ဓာကိုယ်တွင် အသားတုံးတစ်တုံး ရှိသည်။ ထိုအသားတုံး မှန်ကန်ကောင်းမွန်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေမည်ဖြစ်သည်။ ထိုအသားတုံး ပျက်စီးလျှင် ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။ သတိပြုကြလေကုန်။ ထိုအရာသည် နှလုံးသားပင်ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျ စည်းမျဉ်းတစ်ချက်မှာ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်နှင့် အရှင်မြတ်၏ ရစူလ်တမန်တော်က (ဟလာလ်) ခွင့်ပြုထားသောအရာများနှင့် (ဟရာမ်) တားမြစ်ထားသော အရာများသည် ရှင်းလင်း ထင်ရှားပေသည်။ မွတ်စ်လင်မ်တို့အတွက် အမှန်ပင် စိုးရိမ်စရာကိစ္စမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စရပ်များဖြစ်သည်။ ထိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများကို စွန့်လွှတ်လိုက်သူသည် ဟရာမ် ထဲသို့ကျရောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကာ မိမိသာသနာနှင့်ပတ်သက်၍ ငြိမ်းချမ်းမှုရရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စကို ကျူးလွန်မိသည့်အတွက် လူများ၏ ပြစ်တင်ပြောဆိုခြင်းမှလည်း မိမိ၏သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းရာ ရောက်ပေသည်။သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများကို မရှောင်ကြဥ်သူသည် မိမိကိုယ် မိမိ ဟရာမ် ထဲသို့ကျရောက်အောင်၊ သို့မဟုတ် လူတို့၏ အတင်းပြောခံရပြီး၊ မိမိ၏သိက္ခာကို ထိပါးစော်ကားခံရအောင် လုပ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်(ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများကို ကျူးလွန်သောသူအား မြေပိုင်ရှင်က တားမြစ်ထားသော နယ်မြေအနီး၌ မိမိ၏ ကုလားအုတ် သို့မဟုတ် သိုး၊ ဆိတ်တို့ကို ကျောင်းသည့် ဆိတ်ကျောင်းသားနှင့်တူသည်ဟု ပမာပေးထားတော်မူသည်။ သို့ဖြစ်၍ ထိုဆိတ်ကျောင်းသား၏ တိရစ္ဆာန်များသည် ၎င်းတားမြစ်ထားသော နယ်မြေနှင့် နီးကပ်နေသောကြောင့် ထိုနယ်မြေထဲသို့ ရောက်လုနီးပါးဖြစ်သွားသည်။ ဤနည်းအတိုင်းပင် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများကို ကျူးလွန်သူသည် ထိုသို့ကျူးလွန်လိုက်သည့်အတွက် ထင်ရှားသော ဟရာမ်နှင့် နီးကပ်သွားပြီး ၎င်းသို့ ကျရောက်လုနီးပါး ဖြစ်သွားပေသည်။တမန်တော်မြတ် (ဆွလ္လလ္လာဟုအလိုင်ဟိဝစလ္လမ်)က ညွှန်ကြားပြသတော်မူခဲ့သည်မှာ အမှန်တကယ်ပင် အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ (အအ်မာလ်)လုပ်ဆောင်ချက်များ ကောင်းသည်၊ ဆိုးသည်ကို အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (အအ်မာလ်)လုပ်ဆောင်ချက်များက ဖော်ပြနေသည်။ ၎င်းကို ကိုယ်တော်က ရှင်းပြခဲ့သည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင် အသားတုံးတစ်တုံး(နှလုံးသား) ရှိပြီး ၎င်းမှန်ကန်နေသ၍ ခန္ဓာကိုယ်လည်း မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းပျက်စီးသွားပါက ခန္ဓာကိုယ်လည်း ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ဟလာလ် (တရားတော်က ခွင့်ပြုထားသော)အရာကို ပြုလုပ်ရန်၊ ဟရာမ် (တရားတော်က တားမြစ်ထားသော) အရာနှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများကို ရှောင်ကြဉ်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။
သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာများအတွက် သီးသန့်ပညတ်ချက်လာရှိထားပြီး ၎င်းပညတ်ချက်နှင့်ပတ်သတ်၍ တရားတော်လာ အထောက်ထားလည်းရှိပေသည်။ ၎င်းအထောက်ထားသည် လူအများစုအတွက် ဖုံးကွယ်နေလျှင်လည်း
အကြင်သူသည် မိမိ၏ရှာဖွေမှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် အခြားသော အပေးအယူကဏ္ဍတို့၌ ပိုင်၊ မပိုင် ဒွိဟဖြစ်ဖွယ်ရာများကို မရှောင်ကြဉ်လျှင် အမှန်တကယ်ပင် ၎င်းသည် မိမိကိုယ်မိမိ ပြစ်တင်ရှုံ့ချခြင်းခံရအောင် ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
နှလုံးသား၏အဆင့်အတန်းကို အလေးထားရန် သတိပေးထားပြီး ယင်းနှလုံးသားကို ကောင်းအောင်ပြုပြင်ရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ နှလုံးသားသည် အမှန်တကယ်ပင် ခန္ဓာကိုယ်၏ ဦးစီးဦးဆောင်ဖြစ်သည့်အလျှောက် နှလုံးသား မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မှန်ကန်ကောင်းမွန်နေမည်ဖြစ်ပြီး၊ နှလုံးသား ပျက်စီးသွားလျှင် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး ပျက်စီးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကိစ္စရပ်တိုင်းကို ဟလာလ်၊ ဟရာမ်ပေါ် အခြေခံ၍ (၃)မျိုးခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းတို့မှာ (၁) ထင်ရှားသည့် ဟလာလ်။ (၂) ထင်ရှားသည့် ဟရာမ်။ (၃) ဟလာလ်၊ ဟရာမ် ဒွိဟသံသယ ဖြစ်ဖွယ်ရာများ။
သာသနာ့ကိစ္စရပ်များကို စွဲမြဲစွာ လိုက်နာကျင့်သုံးပြီး လူ့ကျင့်ဝတ်ကိုလည်း စောင့်ထိန်းရမည်။
ဟရာမ် တားမြစ်ထားသော အရာများဆီသို့ ပို့ဆောင်ပေးသော အကြောင်းခံများကို ပိတ်ပင်တားဆီးထားသည်။ ဤသည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှရီအဟ် တရားတော်တွင် အထောက်အထားများစွာရှိသည်။
လက်တွေ့ကျင့်သုံးမှုဆိုင်ရာ ရှရီအဟ် တရားတော်၏အဓိပ္ပါယ်များကို ဥပမာများဖြင့် တင်ပြထားသည်။
ဖိကဟ်နှင့် ၎င်း၏စည်းမျဥ်းများ။ . ဖိကဟ်ဓမ္မသတ် စည်းမျဥ်းများ။ . ရှရီအသ်အမိန့်ပညတ်ချက်။ .
အကယ်၍ အသင်တို့သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်ကို အားကိုးထိုက်သည့်အတိုင်း ယုံပုံအားကိုးမည်ဆိုလျှင် နံနက်ခင်းတွင် ဝမ်းဗိုက် ဟောင်းလောင်းဖြင့် ထွက်သွားကြပြီး ညနေတွင် ဝမ်းဗိုက်ပြည့်လျှက် ပြန်လာကြသည့် ငှက်များကို အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်က ရိုဇီရိက္ခာချီးမြှင့်သကဲ့သို့ သင်တို့အား ရိုဇီရိက္ခာချီးမြှင့်တော်မူမည်ဖြစ်သည်။